हातको औला हेरेर जान्नुस् तपाई कतिको भाग्यमानी हुनुहुन्छ ? – Medianp
हातको औला हेरेर जान्नुस् तपाई कतिको भाग्यमानी हुनुहुन्छ ?
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २९, २०७५१७:२९0
काठमाडौँ,२९ भदौ । ज्योतिष शास्त्रले हस्तरेखा सम्बन्धी थुप्रै कुराहरुको प्रमाणीत गरेका छ । विज्ञानले सत्य सावित नगरेको कुरा शास्त्रमा हुँदैन् । हाम्रो हातमा भएका विभिन्न रेखाहरुको आ आफ्नै विशेषता रहेको हुन्छ । मानिसको भविष्य हातका ती मसिना रेखाहरुमा लुकेर बसेको कुरा ज्योतिष शास्त्र अध्यन गरेका मानिसहरुले मात्र बताउन सक्छन् । त्यस्तै हाम्रो हातको औलाको लम्बाइले पनि ब्यक्ति भविष्य र भाग्य बताउने गर्छ । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई हातको औलाले जीवनमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
साहिली औंला चोर औंला भन्दा ठूलो हुने व्यक्तिहरु : चोर अ‍ैला भन्दा साइली औँला ठूलो हुने व्यक्तिको व्यक्तित्वको कारण धेरै मानिसहरु आकर्षित हुने गर्छन् । उनीहरुले सोचेको कार्यहरु समयमा नै सफल हुने र लक्ष्यमा पुग्न सफल हुने गर्छ । उनीहरुले हरेक काम गर्दा अरुको कुरा नसुनी आफ्नै तरिकाले गर्नु उनीहरुको विषेशता रहेको हस्तरेखा विज्ञानले बताएको छ ।
चोर औंला साहिली भन्दा ठूलो हुने व्यक्तिहरु : हस्तरेखा विज्ञानले बताएअनुसार चोर औँला भएका व्यक्तिहरु प्राय एक्ले बस्न मन पराउने हुन्छन् । अरुको कुरा नसुनी आफ्नो कार्य गर्नु उनीहरुको विषेशता हो । उनीहरु आफैमा अधिक मात्रामा आत्माविश्वास गर्छन् ।
चोर औंला र साईली औंला बराबर भएका व्यक्तिहरु : साइलाी औँला र चोर औँला दुवै बराबरी भएका मानिसहरु शान्त स्वभावको हुने गर्छन् । उनीहरु भलादमी र इमान्दारी स्वभावको हुने भएकाले झगडा गर्ने अन्य विवादहरुबाट टाढा रहने गर्छन् । उनीहरुलाई काम गर्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने हस्तरेखा विज्ञानले बताएको छ ।
एक महिनाको बालक आमाको काखबाट टिपेर भागेको बिरालो २ तल्लाबाट बिराले हामफालेपछि